ko htike's prosaic collection: အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံ ရဲ့  နှစ်ပတ်လည် ထိပ်သီးအစည်း အဝေး
အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံ ရဲ့  နှစ်ပတ်လည် ထိပ်သီးအစည်း အဝေး
အာဆီယံနဲ့ အရှေ့ အာရှ အစည်းအဝေးကို စင်ကာပူမှာ လက်ရှိကျင်းပလျှက်ရှိပါတယ်။ ဒီအစည်းအဝေးမှာ အုပ်စုအတွင်းရှိ နိုင်ငံတွေမှာလူ့အခွင့် အရေးကို အာမခံပေးနိုင်မဲ့ အချက်အလက်တွေပါဝင်မဲ့ ဥပဒေအခြေပြု အာဆီယံသဘောတူညီချက် ပဋ္ဋိညဉ် အာဆီယံချာတာကိုလည်း လက်မှတ်ရေးထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီချာတာမှာ မကြာသေးခင်ကမှ တိုင်းပြည်အတွင်းမှာ ပြည်သူတွေ ရင်ဆိုင်ခံစားနေရတဲ့  ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးဘို့ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ သံဃာနဲ့ ပြည်သူတွေကို ပစ်ခတ်ချေမှုန်းပြီး လူ့အခွင့်အရေးတွေကို အကြီးအကျယ်ချိုးးဖောက်ထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကလဲ ပါဝင် လက်မှတ်ထိုးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဆီယံ ဆမ်မစ် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး မတိုင်ခင် ၂ လခန့်အလိုထဲက အစည်းအဝေးက ဆွေးနွေးမှုတွေ၊ ဆုံးဖြတ်မှုတွေ ကနေ ကျမတို့ မြန်မာပြည်သူတွေ အတွက် ဘာတွေ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ ရလဒ်ကောင်းတွေ ပေါ်ထွန်းလာနိုင်မလဲလို့ မျှော်လင့်ခဲ့ကြတာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မို့ အခုဆိုရင် ၁၀စုနှစ် တစ်ခုတောင် ရောက်ခဲ့ ပါပြီ။ ရက်တွေ နီးလာတဲ့ အမျှ မျှော်လင့်ချက်တွေက ပိုလို့ တိုးလာပြီး အစည်းအဝေးရက်တွေ အတွင်းမှာတော့ တက်လိုက် ကျလိုက်နဲ့ ပါ။
နောက်ဆုံးပိတ် အစည်းအဝေးပြီးဆုံးမှဘဲ ဘာမှသိပ်မထူးခြားစွာနဲ့ မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာလဲ ရေရေ ရာရာ မရှိ ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေကြာခဲ့ပါပြီ။ အာဆီယံ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့ ဒေသတွင်းအကြီးဆုံးနဲ့ အင်အားအရှိဆုံး အဖွဲ့အစည်းကြီးပါ။ ဆွေးနွေးဖက် မိတ်ဖက် နိုင်ငံတွေကလဲ အိမ်နီးချင်းလဲဖြစ် အင်အားလဲကြီးမားတဲ့ အိန္ဒိယ၊ တရုတ် နဲ့ အခြားအင်မတန်အရေးပါတဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေမို့ လူသားတွေရဲ့ ကောင်းကျိုး နိုင်ငံရေးစီးပွားရေး လူမှုရေး ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ တွေလဲ အင်မတန် န်ှီးနှောဖလှယ်လို့ ကောင်းတဲ့ အရေးပါတဲ့ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ တွေ့ဆုံပွဲကနေ ယူတတ်ရင်တော့ မိမိနိုင်ငံ အတွက်ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုတွေကို ရနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
ကျမတို့ပြည်သူတွေ ကတော့ ဒီလိုကိုယ့် နိုင်ငံမှာ အထွေထွေအကြပ်အတည်းမျိုးစုံကြုံနေရပြီးနှစ်ပေါင်း ၄၅ နှစ်တာမျှမတရားတဲ့ အမိန့်အာဏာနဲ့ ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ခံနေရ ရာက နှစ်ပေါင်း ၂၀ နီးပါးအတွင်း အကြီးမားဆုံးလူထုအင်အားနဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြလို့ စစ်တပ်ကလက်နက်နဲ့ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲပစ်ခဲ့ပြီး
နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တစ်ယောက်အပါအ၀င် သံဃာနဲ့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအသက်ဆှုံးရှုံးခဲ့ ရတဲ့ အဖြစ်ကို မမေ့ဖျောက်နိုင်ကြပါဘူး။ ဒီလိုအချိန်အခါမျိုးမှာ ဒေသတွင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ အာဆီယံ အစည်းအဝေးကနေ ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့ အစည်းက ဘာတွေများလုပ်ပေးနိုင်ပါမလဲလို့ ပိုပြီးမျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ မစားရ ၀ ခမန်းအပြောအဆိုတွေကလဲ ဒီမျှော်လင့်ချက်တွေကို ပိုလို့ တိုးစေခဲ့တာပေါ့။ အတွေ့ အကြုံတွေအရ ရာနှုန်းပြည့် ယုံကြည်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ပွဲစ စချင်းမှာဘဲ အင်မတန်တင်းမာတဲ့ အာဏာရှင်စစ်အစိုးရကတော့ သူရဲ့့ခေါင်းမာမှုကို တပြားသားမှမလျော့ဘဲ မြန်မာနိင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူထုအုံကြွမှုနဲ့ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုတွေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ရဲ့ အထူးသံတမန် မစ္စတာဂန်ဘာရီ ရဲ့  ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကို အရှေ့အာရှ အာရှနိုင်ငံတွေကို အစီရင်ခံ မဲ့ အစီအစဉ်ကို သဘောမတူပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အရေးဟာပြည်တွင်းရေး သာဖြစ်ပြီး မိမိဘာသာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်…မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပုံမှန်အခြေအနေရောက်နေပါပြီ လို့ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်တွေ ပြောကြားခဲ့ ခြင်းဟာ လက်နက်မဲ့ ပြည်သှူတွေကို ဥပဒေမဲ့ သတ်ဖြတ်ခွင့် မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခွင့် ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ခွင့် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချခွင့်တွေ ရထားတဲ့ လက်နက်ကိုင်စစ်တပ်တခုက အကြောက်တရားနဲ့ ဖိနှိပ်ထားလို့ အပေါ်ယံ ငြိမ်သက်နေခြင်းကိုပုံမှန် အခြေအနေပါဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါ့မလား ..… နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီများ သုံးသပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ယခင် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုချုပ်ဟောင်း ကိုဖီအနန်က ပြောခဲ့ဘူးပါတယ် .. မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ဝေးလံခေါင်ဖျား အစွန်ကျတဲ့ ထောင့်တနေရာမှာ မတည်ရှိပါဘဲနဲ့ ဒီလောက်ဖွံ့ ဖြိုးမှုနဲပါးပြီး ဆင်းရဲမွဲတေနေတာ ဟာမဖြစ်သင့်ပါဘူးတဲ့…မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လှပတဲ့မြေပုံကိုကြည့် ရင် ရှည်လျားတဲ့ကမ်းရိုးတန်းးမိုင်တွေ .နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေတဲ့ မြစ်ချောင်းအသွယ်သွယ်တွေ နဲ့ တောင်စဉ်တောင်တန်းတွေဟာ ဘိုးဘွားအမွေအနှစ်တွေ အဖြစ်မြတ်နိုးဘွယ်ရာတွေ့ရမှာပါ။
ကျမတို့နိင်ငံရဲ့  ပေါကြွယ်လှတဲ့ သဘာဝရင်းမြစ်တွေကို စီမံအုပ်ချုပ်မှုကောင်းတွေနဲ့ ပေါင်းစပ် ၊နိုးကြားတက်ကြွပြီးအလုပ်ကြိုစားတဲ့ မြန်မာ့လူသားရင်းမြစ်တွေနဲ့ တည်ဆောက်လိုက်ရင် ဒီဒေသတွင်းမှာ တည်ငြိမ်ပြီးခေတ်မီဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတခုပေါ်ပေါက်လာပြီး အရှေ့တောင်အာရှဒေသဟာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ပိုလို့တင့်တယ်လာမှာမလွဲပါဘူး ။
ခုတော့ အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်း သန်း ၅၀ သောကျမတို့ပြည်သူတွေဟာ နေ့စဉ်ဘ၀မှာ စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်းမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရင်းစစ်အစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်တဲ့ အုပ်ချုပ်မှု ဥပဒေမဲ့ညှဉ်းပမ်းမှု ကျင့်ပျက်ခြစားမှု မတရားခိုင်းစေမှု စတဲ့ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးဖောက်ဖျက်မှုတွေကို ရင်စည်းခံကြရင်း နောင်လာမဲ့ မျိုးဆက်သစ် တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂါတ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူငယ်တွေဟာလဲ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ ပညာကိုမသင်ကြားနိုင်ဘဲ ကြုံသလိုလုပ်ကိုစားသောက်နေရပါတယ်..အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာ လုံခြုံမှုမရှိ အဆင့်နိမ့်အလုပ်သမားတွေဘ၀နဲ့ တိုင်းပြည်က ထွက်ခွာသွားနေကြရတယ်။
ကျမတို့မြန်မာပြည်သူတွေဟာလဲ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ အချို့ က ပြည်သူတွေလိုဘဲ ကောင်းမွန်တဲ့ စီမံအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ ဥပဒေရဲ့ အကာအကွယ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပညာရေး အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ လှပတဲ့ ဘ၀တွေကိုတည်ဆောက်ချင်ကြပါတယ်။
နိုင်ငံတခုထဲနဲ့ သီးခြားရပ်တည်လို့မရတော့တဲ့ ဒီရာစုနှစ်မှာ နိင်ငံနယ်နိမိတ်တွေ ကျဉ်းမြောင်းပြီး တနိုင်ငံနဲ့ တနိုင်ငံ ကဏ္ဍမျိုးစုံမှာ ကူးလူးဆက်ဆံနေကြတဲ့အခါမှာ ကျမတို့ မြန်မာပြည်သူတွေ ဟာ ဒေသတွင်းက ပြည်သူတွေလိုဘဲ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုခံစားချင်ကြပါတယ်။
မိသားစုဝင်တွေပါလို့ ဆိုတဲ့ အာဆီယံ နိုင်ငံတွေ ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေကို တကယ်မိသားစုတွေလို သဘောထားကြမယ်ဆိုရင် ပြည်သူတို့ရဲ့ အသံတွေကိုမပြစ်ပယ်ဘဲ နားထောင် ကြည့်စေချင်ပါတယ် .. တကယ့်ပြည်သူတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့လဲ ဆုံတွေ့ဆွေးနွေးပြီး အဖြေရှာနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကို ကြံဆစေချင်ပါတယ် .. မ်ိမိနိုင်ငံကို ကောင်းမွန်တဲ့စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်ပြီးဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဦးဆောင်မှုပေးနေတဲ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ တောက်ပြောင်လှတဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ကျမတို့ အများကြီးလေးစား အားကိုးမိပါတယ်။
ဒီအရည်အချင်းတွေနဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို အသုံးချပြီးမိမိ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတခုကို လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်အောင် ဆွဲခေါ်ပေးဘို့ အလေးအနက် တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
ပြည်သူကိုကိုယ်စားမပြုတဲ့ အာဏာရှင်လူတစုရဲ့  အလိုကျ ဖြစ်စေဘို့သာ ဆောင်ရွက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ နောင်လာမဲ့နှစ် ဆွေးနွေးပွဲတွေအပေါ် ကျမတို့အနေနဲ့ ယုံကြည်မျှော်လင့်စရာ အကြောင်းရှိလာတော့မယ်မဟုတ်ပါကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
Posted by ကိုထိုက် at 23:04
Yes Yes....so this year ASEAN submmit has apparently revealed that urgently need to change the leaders in region, not only Myanmar stupid dump junta but also incompetence, bias, corrupt and birbery and unethical reginal leaders those people may not have acumen sense and unable to see or think about long-run for all people goodness in region as well as global. I condem them.
22 November 2007 at 05:25
aung... Thank you for your comment , I also the negligence of these dictator asean leaders and do not trust them. They all are bullying the Myanmar people who already have been suffering .So we who want justice, peace and democracy definitely need to fight not only Myanmar junta but also regional leaders who cheat us.
22 November 2007 at 13:52
22 November 2007 at 13:53